जहाज चढ्नुअघि यात्रुको वजन नापिने, कारण यस्तो छ - IAUA
जहाज चढ्नुअघि यात्रुको वजन नापिने, कारण यस्तो छ
ramkrishna November 9, 2017	कारण यस्तो छजहाज चढ्नुअघि यात्रुको वजन नापिने
हवाइजहाजमा यात्रा गर्दा यात्रुका झोलाको तौल नाप्नु त स्वभाविकै हो । तर के कहिल्यै यात्रुकै शरीरको तौल नापेको सुन्नुभएको छ ? सायद दुनियाँमा यस्तो कतै पनि हुँदैन । तर युरोपमा भने एउटा वायुसेवा कम्पनीले विमानमा चढाउनुअघि यात्रुको तौल नाप्न थालेपछि चर्चा कमाएको छ ।
फिनल्याण्डको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक फिनएयर नामक विमान कम्पनीले जहाजमा यात्रुहरुलाई चढाउनुअघि हरेक यात्रुको शरीरको तौल नाप्न सुरु गरेको छ ।
आखिर किन यस्तो गरेको हो त कम्पनीले ? कतै जहाजमा धेरै मोटा यात्रु चढ्दा जहाजको भार बढी हुन्छ भनेर त होइन ?
वास्तवमा कम्पनीले आफ्ना ग्राहकहरुको वजनको तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ । यसबाट कम्पनीले अध्ययन गरेर भविष्यमा विमानको इन्धन खर्चमा कटौती गर्ने योजना तयार गर्नेछ । उडानको दौरान हुने अतिरिक्त इन्धन खपत कम गर्नमा प्राप्त तथ्यांक सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
फिनल्याण्डमा हवाई यात्रुको वजनसम्बन्धी सबै मापदण्ड तथा नियम युरोपियन उड्ययन सुरक्षा एजेन्सीले तय गर्दछ ।
यद्यपि, यससम्बन्धी कतिपय नियमहरु एक दशक पूराना भैसकेका छन् र समयानुकुल नयाँ नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताइएको छ । फिन एयरले चाहिँ आफ्नो एयरलाइन्सको लागि आफैँ त्यो काम गर्दैछ ।
Previous Previous post: ‘दा भिन्सि कोड्स’को रहस्य खुल्यो, चर्चित चित्र मोनालिसाको रहस्य ‘एलियन’!
Next Next post: बढुवाको लोभमा धेरै काम गर्दा जागिर नै चट् !